Aqoonyahan Dhoolayare: ” Goodax Bare Shahaado uu qiimaynkaro oo Puntland ay leedahay majirto (dhegayso) – Radio Daljir
Aqoonyahan Dhoolayare: ” Goodax Bare Shahaado uu qiimaynkaro oo Puntland ay leedahay majirto (dhegayso)
Seteembar 5, 2020 1:42 g 0
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa saddax maalin ka hor waxa uu Muqdisho ku daah furay manhajka waxbarashada ee Dugsiyada Sare ee dalka.
Daah furkaasi madaxweynaha kadib Shalay oo Jimco ahayd sii hayaha xilka wasiirka waxbarashada DFS Godax Bare ayaa markale ku celiyay in aysan ardayda Puntland uhaynin wax shahaado ah hadi aysan galin imtixaanka ay dowladdu qaad, ayna qiimayn doonaan Shahaada ay wataan.
Tan iyo markii la aaas aasay Puntland 1998dii Ardayda Puntland waxa ay ka baxayeen Dugsiyada Sare,qaarkoodna deeqo wax barasho ayay ka helayeen dalka dibadiisa iyadoo dowladda hada jirta aysan lahayn manhaj waxbarasho.
Hadaba maxaa lagu tilmamai karaa hadlaka Goodax Bare? Maxaase xiliga ku soo beegay? su aalahaas iyo kuwo kale waxaan waydiinay Cabdisalaan Maxamed Cali Faarax oo kamd ahaa macalimiintii wax ka dhigijirtay Jaamacada Lafoole, isagoona hadalka Goodax Bare ku tilmaamay mid uu ku xalaalaysano in deeqaha waxbarasho ee Puntland ay ka hesho dalka dibadiisa.
Hoos kaga bogo waraysiga.
Madaxweynaha Puntland oo kulan is xogwareysi ah la qaatay xubnaha Wafdigiisa